अस्टधातु शिव मुर्ती निर्माण विराट ज्ञानमहायज्ञ हुने - Saptakoshionline
अस्टधातु शिव मुर्ती निर्माण विराट ज्ञानमहायज्ञ हुने
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १६, २०७४ समय: १०:४२:०९
चितवन, चैत १५ – चितवनमा पाँचौ अस्टधातु शिव मुर्ती निर्माण विराट ज्ञानमहायज्ञ हुने भएको छ । भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलस्थित सहकारी विकास बोर्डको प्राङ्गणमा चैत्र २२ देखि ३० गतेसम्म महायज्ञ हुन लागेको हो । आयोजक देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानले आज (बिहीबार) भरतपुरमा पत्रकार सम्बेलन गरी जानकारी दिएको छ । धार्मिक विकासका निम्ति संग्राहलय हरियाली पार्क र अस्टधातु मिश्रित ३० फिट अग्लो भगवान शंकरको मुर्ति निर्माणका लागि महायज्ञ संचालन गर्न लागिएको देवघाटधाम संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । महायज्ञको चैत २२ गते प्रदेश नं. ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
धर्म सँस्कृतिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न यस कार्यक्रम फलदायी हुने अधिकारीले बताउनुभयो । शिव मुर्ती सहितको दिब्यधामको निर्माणको लागि करिब ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । साथै करिब सय क्वीन्टल अस्टधातु आवश्यक पर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । मुर्ती स्थापनाका लागि नै अहिलेसमम ४ पटक महायज्ञ गरी सकिएको छ । विभिन्न बोलबमको अबसर पारेर देवघाट धाममा २ पटक र रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित भक्तिनी बगैचा र सौराहामा महायज्ञ गरिएको हो । जसबाट अहिले सम्म ३३ लाख ३२ हजार रुपैयाँसहित ३८ क्वीन्टल अस्टधातु संकलन भइसकेको छ । प्रतिष्ठानद्वारा लक्षित संरचनाको नक्शांकन सम्पन भइसकेको आयोजकको दाबि छ । देवघाटमा सरकारको नाममा रहेको १.४७ हेक्टर जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ३० फिट अग्लो भगवान शंकरको मुर्ती २ वर्षमा सकिसक्ने अधिकारीको दाबी छ ।